China New Style Original Custom Logo Anti Slip Zapatillas Casual High Top Sneakers ho an'ny Lehilahy Manamboatra sy Factory | JIAN ER
New Style Original Custom Logo Anti Slip Zapatillas Sneakers ambony ambony ho an'ny lehilahy
Kiraro avo lenta avo lenta avo lenta ho an'ny lehilahy vaovao. Toro-hevitra momba ny vokatra fivarotana mafana JIAN ER orinasa. Ny ambony dia vita amin'ny lamba sy hoditra. Ny firafitra dia marefo, mazava ary voajanahary. Mamirapiratra, afaka miaina ary mihetsika ny velarana hoditra, ary manana endrika miorim-paka izy ary mifanaraka amin'ny tongotra. Fomba mahazatra sy malala-tanana, ny kiraro boribory dia mahazatra nefa tsy manindry tongotra, manome toerana malalaka ho an'ny hetsika ny tongotra, ary manana traikefa ahazoana aina ilay mpanampy ....
Kiraro avo lenta avo lenta avo lenta ho an'ny lehilahy vaovao. Toro-hevitra momba ny vokatra fivarotana mafana JIAN ER orinasa. Ny ambony dia vita amin'ny lamba sy hoditra. Ny firafitra dia marefo, mazava ary voajanahary. Mamirapiratra, afaka miaina ary mihetsika ny velarana hoditra, ary manana endrika miorim-paka izy ary mifanaraka amin'ny tongotra. Fomba mahazatra sy malala-tanana, ny kiraro boribory dia mahazatra fa tsy manindry ny tongotra, manome toerana malalaka ho an'ny hetsika ny tongotra, ary manana traikefa ahazoana aina ilay mpanampy. Ny volavolan-tsofina manandratra sofina dia ampidirina amin'ny ombelahin-tongony mba hialana sasatra sy mety kokoa amin'ny fananganana traikefa. Ny vavan'ny kiraro dia natao tamin'ny tanany ba kiraro, izay mifanentana tsara amin'ny kitrokely ary maharaka tsara amin'ny onja. Ny vava voditongotra dia matevina ary nofenoina hanatsarana ny fitoviana eo anelanelan'ny vodin-tongotra sy ny voditongotra ary manatsara ny fahombiazan'ny fanoherana sy ny fikolokoloana. Ny famolavolana mangatsiatsiaka, mahasarika maso ary mahasarika ny maso, ny famolavolana splicing dia miteraka fironana amin'ny toetra. Ny tokana dia vita amin'ny akora vita amin'ny fingotra, tsy mihetsika ary tsy mahazaka akanjo, mahazo aina ary manala endrika, atambatra amin'ny alokaloka alokaloka, hampitomboana ny fihazonana, malefaka sy mahazaka ary mandeha malalaka. Mety ho an'ny fotoana tsy mahazatra sy fanatanjahan-tena, tsy maintsy ananana ho an'ny lehilahy maody.
Sneakers avo lenta
700 Pairs / Colour / Style
Manome serivisy OEM marika sy serivisy ohatra izahay. Raha tianao ny vokatray dia azonao atao ny manova ny fitaovana sy ny logo ilaina. Na manana ny volavolanao ianao, manamboatra santionany mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izahay. Ny vidin'ny santionany dia US $ 100 isam-bolana, tsy ao anatin'izany ny paositra. Raha mametraka baiko be dia be ianao dia haverina ny sarany santionany. Ny fotoana fitarihana santionany dia15 andro fiasana. Ny filaharana voalohany dia manodidina ny 60 andro aorian'ny fanamafisana ireo santionany, ny famerenana ny famerenana dia manodidina ny 50 andro .Ny laharam-pandraharahana farafahakeliny dia 500 tsiroaroa misy loko sy mpivady 2000 amin'ny fomba iray. Raha manana takiana habetsahana hafa ianao dia azonao atao ny manatona anay amin'ny habetsaky ny namboarina sy ny vidiny tsara kokoa.Raha te-hanamboatra kiraro ianao ary liana aminay dia afaka mifandray aminay ianao.
Teo aloha: Fomba vaovao mametaka kofehy anti-slip Zapatillas vehivavy lehilahy kiraro ho an'ny vehivavy 2021
Manaraka: Vidiny ambongadiny kiraro vita amin'ny Skateboard China hoditra ambony lehilahy
Kiraro fanatanjahan-tena amin'ny basikety ho an'ny lehilahy
Kiraro Men Sport Sport